एभरेष्ट प्रिमियर लिग : भैरहवाद्वारा ललितपुर समक्ष ९३ रनको सामान्य लक्ष्य प्रस्तुत
काठमाडौ । ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको ललितपुर प्याट्रीयट्स एभरेष्ट प्रिमियर लिग टी ट्वान्टी क्रिकेटको क्वालिफायरमा पुगेको छ । आईतवार सम्पन्न लिग चरणको अन्तिम खेलमा शरद भेषावकरको भैरहवा ग्लाडीयटर्सलाई ६ विकेटले हराएर ललितपुर क्वालिफायरमा पुगेको हो । किर्तिपुरस्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भैरहवाले दिएको ९३ रनको सामान्य लक्ष्य ललितपुरले १४ ओभर २ बलमा मात्र ४ विकेट गुमाएर […]
आइतवार, पुस १, २०७५
काठमाडौं प्लेअफमा, चितवनको सम्भावना कति ?
काठमाडौं– काठमाडौंमा जारी एभरेष्ट प्रिमियर लिग ईपीएलमा काठमाडौं किंग्सले भैरहवालाई ७ विकेटले हराउँदै प्लेअफमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको भैरहवाले २० ओभरमा चार विकेट गुमाउदै १३९ रन बनायो । भैरहवाले खराव सुरुवात गर्दै आठ रनमा दुई विकेट गुमायो । उसका ओपनर प्रदिप ऐरीले खाता खोल्न सकेनन् भने […]
मनाङलाई पछ्याउँदै थ्रीस्टार, उक्लियो दोस्रो स्थानमा
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा जित हात पार्दै उपाधिको दाबेदाबर टोली थ्रीस्टार दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । अपराजित रहेको मनाङ अहिले सम्म खेलका सबै ८ खेल जित्दै शीर्षस्थानमा रहेको छ । थ्री स्टारले एकमात्र खेल मनाङसँगै गुमाएको थियो । रञ्जित धिमालको गोलमा शनिबार मछिन्द्र क्लबलाई १–० ले […]
सिन्धुलीमा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु
बाग्लुङ, रूकुम लगाएतका जिल्लामा आजमात्रै १ सय १४ जना संक्रमित थपिए, निको हुनेको संख्या १ सय ८३
रविभवन स्थित सवारी दुर्घटनासँग जोडिएका कर्णेल जमानीमा छुटे
रौतहटमा कोरोना संक्रमितको संख्या १०४ पुग्यो
रौतहटमा थप ३५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
हेटौंडाकी गर्भवती महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण
फिल्म उद्योगमा अश्लील भिडियो आतंक भन्दै प्रहरीमा उजुरी
संसदको कार्यसूचीबाट एकाएक किन हट्यो संविधान संशोधन विधेक ?
महङ्गो मूल्यमा मास्क र स्यानिटाइजर बेच्ने अनलाईन पसलेलाइ कारवाही
भारतबाट नेपाली नागरिक ल्याउने क्रम जारी
नेपाली सेनाले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्री लिन जहाज चिन जाँदै
बागलुङमा थप ६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
नेपालको नयाँ नक्सा आफूखुसी बिक्री वितरण गरे कारबाही गरिने
बर्दियाको बबई बहुमुखि क्याम्पस् क्वारेन्टिनमा १ जनाको मृत्यु : कोरोना रिपोर्ट आउँनै बाँकी
जाजरकोटमा बालुवाको ढिस्कोले पुर्दा २ जनाको मृत्यु
भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकैदिन १ सय ७० जनाको मृत्यु, डेढलाख बढि संक्रमित, ६४ हजार बढी निको भए